Umdlavuza wegazi (umdlavuza wegazi, wegazi, ene-leukemia) - isifo oncological negazi, ogxile kuphula umthetho we hematopoiesis izinqubo, owabonakaliswa ukubuyabuyelela engalawuliwe beya hematopoietic amaseli. Igama elithi "wegazi" libhekisela isifo ezingaphezu kweyodwa - sifaka lonke iqembu izifo, futhi kuthatha igama lawo uhlobo amaseli abathintekayo.
Izimbangela izindlela wegazi
It is wafakazela ukuthi ngaso enhliziyweni ukwanda okungaqondiswa kwamadolobha egazi kukhona ethize kuguquka wama-chromosomes, ezivukayo bedle ezinye izici zangaphandle, labo eziyinhloko:
ngemisebe (eyaziwa ngokuthi ngemva ukuqhuma we enuzi eChernobyl, inani labantu baseYurophu ezinomdlavuza wegazi, lenyuke kakhulu);
carcinogens imvelo chemical (-benzene, imithi yokubulala izinambuzane, petroleum distillates, abanye izidakamizwa);
Ngaphezu kwalokho, kukhona yofuzo umdlavuza wegazi. Ingozi wegazi egazini izihlobo umuntu uhlushwa lesi sifo 3-4 izikhathi kunakunoma abantu umndeni ukuthi unomdlavuza wegazi is hhayi bahlangana. Kuyaqondakala ukuthi luthathwe yi ezifweni amaseli ukuze kwezakhi, kunokuba nje kwesifo ngokwaso.
Ngakho, kukhona izinto ngokuguqula izakhi, wama-chromosomes, futhi kwesinye sezitokisi igazi-ukwakha umnkantsha, uqale ngenkuthalo ziyanda, ukwakha isimila. Lokhu izicubu kancane kancane ingena esikhundleni enempilo umnkantsha emangqamuzaneni okuthiwa ama-livezwa izimpawu ezihlukahlukene. Kusukela isimila cells kusukela umnkantsha ngokuhamba kwesikhathi lingene egazini, nge zamanje okuyinto zasakazekela umzimba, ukwakha metastases kwezitho ahlukahlukene (ngokuvamile ngo-lymph node, isibindi kanye ubende). Umdlavuza wegazi amaseli siguqula izicubu zomzimba ezisithinta ngayo, futhi zizenza zazo siqu.
Ukwahlukanisa futhi izimpawu zesifo
Zonke leukemias by uhlobo ukugeleza zabo kungenziwa zihlukaniswe ngamaqembu 2: oyingozi futhi ezingalapheki.
wegazi olunamandla kwenzeka uma inqubo hematopoiesis evele sinqanyuliwe ngesikhathi usaqala kakhulu. Ngenxa yalokho, ngo-umnkantsha ukuqhuma kuhamba phambili, futhi isibalo eziphakathi amaseli hemopoietic ivame zero. Lolu hlobo lomdlavuza wegazi libhekene ukugeleza ngokushesha futhi siqukethe 5 nezikhathi:
predleykozny (iziguli esekhala ubuthakathaka jikelele, ukukhathala, imnyama, yizifo njalo; igazi neuropathy kulesigaba kungenzeka evamile noma iyahlanekezeleka kancane);
acute (iqala imfiva, ukungabi esesuthi, ubuhlungu amathambo namalunga, isikhumba kanye nolwelwesi lwamafinyila avele ukopha (njengoba melkotochechnye futhi wenziwa endaweni ebanzi) evuvukele lymph node, ubende kanye isibindi, kanye amygdala, elibangela nenkinga yokugwinya, e kwenani labafana neuropathy igazi leukocyte kukhona blastic cell ukuma, inombolo sanciphisa kangcono ka-platelet ne-amangqamuzana abomvu egazi);
ukuthethelelwa (akukho ukubonakaliswa emitholampilo bengekho e-peripheral igazi ukuqhuma, inombolo yabo ngaphakathi umnkantsha akuyona ezingaphezu kuka-5%);
wegazi Okungalapheki ibizwa ngokuthi uma inqubo sokugembula abathintekayo amafomu ngaphezulu omdala kwamangqamuzana egazi kuka kuqhuma. Ngalesi sikhathi eside lesi sifo futhi esibonakala ngokuqina ukuntuleka izimpawu liphinyiselwe: iziguli eminyakeni kungenzeka ukhathazekile nobuthakathaka, ukukhathala, ukujuluka, imnyama, kamuva okwandisa isibindi, ubende kanye zamanzi.
Ukuze yenze induduzo ngokwengqondo isiguli noma nini uma kungenzeka Kunconywa ukuthi yokwelapha esekelwe umnyango esibhedlela usuku Oncology futhi Haematology. Esimweni lapho esibhedlela kuyadingeka, amasevisi anikezwa ukuba iziguli izigceme ukhululekile zonke izindawo, imidlalo Igumbi nokubuka amavidiyo.
Ukwelashwa Ubude besikhathi 24 izinyanga wegazi, 6-8 zazo isiguli esibhedlela, futhi okusele sihamba yokwelapha sinenkonzo yokunakekela iziguli emakhaya.
Isigaba sokuqala ukwelashwa wegazi kule eziphezulu Ichilov Umtholampilo ibizwa ngokuthi "lokungeniswa ka ukuthethelelwa" futhi kuyinto nokwelashwa ngamakhemikhali yakhelwe ukuze kubulawe amangqamuzana amaningi abanga isifo somdlavuza ngangokunokwenzeka.
Eyesibili isinyathelo - nokuvimbela yokuphindela isifo - okwengeziwe kuhlanganisa 3 izigaba nokwelashwa ngamakhemikhali:
ukuhlanganisa (abadala kulesi sigaba ihlala izinyanga 1-3, ezinganeni - izinyanga 4-8; eseyiqedile asele ngabanye isimila cells);
ukwelashwa yesondlo (wasebenzisa chemotherapy kuthiwa, kodwa ngemithamo ezincane kakhulu, inhloso zalesi sigaba kuyinto zokuvimbela lokubuya kwesifo);
ukuqiniswa (zisebenzisa nokwelashwa ngamakhemikhali ngaphezulu asebenzayo).
Endabeni ka ukwehluleka ngamakhemikhali, umnkantsha transplantation siqhutshwa lwama-stem cell ukufakelwa.
Indlela ezengeziwe yokwelashwa iyona ukuchayeka zobuchopho nomgogodla ngenxa Ukudlulela njalo endaweni idatha.
Kwezinye izimo, ukuze kwelashwe wegazi ngodokotela Umtholampilo eziphezulu Ichilov esetshenziswa futhi eyodwa yezindlela entsha - yokwelapha okubhekiswe. izinto zokwelapha zilethwa ngqo egazi onesifo, ngemva kwalokho umzimba zale cell akhiqiza amasosha omzimba zivimbela ukukhula kwabo.
Isinyathelo sokugcina ekwelapheni wegazi eziphezulu Ichilov clinic lwesigaba nokuvuselelwa, phakathi kwesikhathi lapho ochwepheshe eduze ukuqapha isimo lesiguli wezempilo ngokushesha ulungise ukwephulwa zenzeka.
Yiqiniso, ukwelapha wegazi e Israyeli kuwufanele imali eningi - izindleko ubuncane ukufakelwa umnkantsha esibuya ahlobene imayelana $ 190000. Nokho, e-Europe, ikakhulukazi e-Germany, operation efanayo balinganiselwa ku-250 000-euro, okuyinto ezibizayo nokunye okuningi, futhi izinga ekwelapheni lesi sifo ngo-Israyeli neze kunabayeni kuya-German.
I zokungcebeleka best of Sochi: Isilinganiso Izibuyekezo holidaymakers
Emission - inkinga imali noma ukuvikeleka?